काठमाडौँमा ६०२ जनासहित उपत्यकामा आज देखियो ७६७ जनामा कोरोना संक्रमण Nepalpatra
४ आश्विन २०७७, आईतवार १६:२१
काठमाडौँ, असोज ४। काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा आज काठमाडौँ जिल्लामा ६०२ जनासहित ७६७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार ब्रिफिंगमा सो कुराको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार आज काठमाडौं जिल्लाका ६०२ जना, ललितपुर जिल्लाका ६४ जना र भक्तपुर जिल्लाका १०१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । हिजो काठमाडौं उपत्यकामा ७११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पछिल्ला दिनहरुमा राजधानी काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । नयाँ कोरोना संक्रमितहरु कुन-कुन ठाउँका हुन् भन्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९५८४ पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने आजसम्म ९ लाख १४ हजार २९० पीसीआर परीक्षण गरिसकिएको छ ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या १७४७८ सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् । संस्थागत आइसोलेसनमा ९०७१ जनाको उपचार भइरहेको छ भने होम आइसोलेसनमा ८४०७ जना रहेका छन् । साथै हालसम्म क्वारेन्टाइनमा ७४५१ जना रहेका छन् ।
नेपालमा आज कोरोना संक्रमण नयाँ १३२५ जनामा पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६४१२२ पुगेको छ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९६६ जनाले कोरोना जितेसंगै नेपालमा कोरोना भाइरस जित्नेको संख्या ४६२३३ पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४११ पुगेको पुष्टि भएको छ ।